Shina: Fitsarana an-tendrony sy fanilikilihana ataon’ny Han amin’ny Uyghur · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2009 15:38 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, বাংলা, Français, Español, Swahili, English
Mihoatra ny iray volana izay no nisian'ny rotaka tany Xinjiang tamin'ny 5 jolay ary mbola manameloka ny Tandrefana sy ny Rebiya Kadeer ho nampiroborobo ny hetsiky ny mpisintaka tany Xinjiang ny ankamaroan'ny mpiserasera shinoa. Misy ihany na izany aza ny bitsika toy izay hita ato amin'ny BBS of people.com ato mipongatra etsy sy eroa, izay mihevitra fa noho ny tsindry hazo lena nandritra ny fotoana maharitra no nahatonga iny rotaka tany Urumqi iny:
Ny fanavakavahan'ny foko Han (maro an'isa amin'ny Shinoa) manoloana ny Uyghurs hatramin'ny fotoana ela nialoha ny rotaka tamin'ny volana jolay no nahatonga iny toe-javatra iny. Raha jerena ny dinika an-tserasera hita ao amin'ny Tianya forum, dia maro ny fitsarana an-tendrony ataon'ny Han amin'ny Uyghurs hitanao ao. Iray amin'izany ity:
Ankoatra ny adim-piainana isan'andro dia maro no leon'ny fitsarana an-tendron'ny Hans sy ny tsy fifankahazoan-kevitra amin'izy ireo. Nitabataba tao amin'ny Tania forum i Mijery ny rahona sy ny rano misosa fa olon'i Xinjiang hanehoany ny fahatezerany amin'ireny fitsarana an-tendrony ireny,
Na dia te-hanitsy ny politika ho amin'ny fiarovana ny fiteny sy ny kolontsaina Uyghur aza ny fitondrana foibe, dia maro ny Shinoa Han no mandà ny hanohana. Ohatra vao haingana amin'izany ny fikasan'ny fitondrana foibe hampakatra avo roa heny ny fanampiana (USD 121 million) ny garabola mampiasa teny roa any Xinjiang. Maro hatrany ny mitaraina amina politikam-piangarana tahaka izao:
Tezitra momba ity fanapahan-kevitra politika ity i Mpandainga tsy manana tetika:
Namaly i Shenqike :
Nanampy i Xwni ,